Deg Deg Daawo Video:Farmaajo Oo Banaanka Soo Dhigay Sirta Qaraxyada Xamar, – KHAATUMO NEWS
Deg Deg Daawo Video:Farmaajo Oo Banaanka Soo Dhigay Sirta Qaraxyada Xamar,
Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka hadlay howlgalada ka dhanka ah Al Shabaab iyo sidoo kale sababaha ay Al Shabaab u kordhiyeen weerarada ay ka geestaan Muqdisho.
Farmaajo ayaa sheegay in ay socdaan howlgalo ka dhan ah Al Shabaab laguna xaqiijinayo amaanka, waxa uuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay dulqaad muujiyaan inta ay ciidamada howlgalada wadaan.
Waxa uu sheegay Madaxweynaha Farmaajo in dowladiisa waqtiga u haray ka shaqeyn doono xaqiijinta amaanka dalka si dowlada ka dambeesa aysan ugu mashquulin amaanka balse ku mashquusho dhinaca horumarka.
”Waxaan doonayaa in dowlada iga dambeyso ay xilka la wareegto dalka oo nabad ah, dowladihii hore dadaal badan ayey ku bixiyeen ka shaqeynta amaanka balse anaga waxaana rabnaa dowlada dambe in aysan amaan ka fekerin” Ayuu yiro Farmaajo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay sababta ay Al Shabaab mar walbo weerarada uga geestaan magaalada Muqdisho, waxa uuna xusay in Al Shabaab hal u jeedo ka leedaha Weerarada Muqdisho.
Waxa uu tilmaamay Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo sababta Al Shabaab weerarada uga geesanayaan magaalada Muqdisho ay tahay la yirhaado dowlad kama jirto Soomaaliya.
Previous Post: Qiso Jacayl murugo leh oo wiil iyo gabadh Soomaali ah ku dhexmartay Xajka
Next Post: DAAWO::Baadi-goob Somaliland Khiyaamada Qaran ee shacabka loo hadoodilay iyo Hidaamooyinka Maafiyada Carbeed ee kusoo wajahan.